ပညာရပ်အစီရင်ခံစာများ သဒ္ဒါ မှန်စေဖို့ (Grammar in Technical Reports by Guy Perring) - Myanmar Network
ပညာရပ်အစီရင်ခံစာများ သဒ္ဒါ မှန်စေဖို့ (Grammar in Technical Reports by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on April 27, 2011 at 14:00 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က ပညာရပ်ပိုင်း အစီရင်ခံစာတွေ ရေးသားခြင်းအကြောင်း အထွေထွေပိုင်း အကြံပြုချက်အချို့ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ အစီရင်ခံစာတွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်း အချို့ကို ဖော်ပြပါမယ်။ ပထမဆုံး နာမ် noun အမျိုးအစားတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုများပြားတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရေတွက်ရနာမ် countable noun နဲ့ ရေတွက်မရနာမ် uncountable noun တွေအကြောင်း ဖော်ပြပါမယ်။
ဥပမာ - အောက်ဖော်ပြပါ ကွက်လပ်များမှာ traffic နဲ့ car ဘယ်စကားလုံးကို သုံးနိုင်ပါသလဲ၊ နှစ်လုံးစလုံး ကြိုက်ရာတစ်လုံးကို သုံးနိုင်ပါသလား။
A .............................. had broken down because of overheating. (အပူလွန်ပြီး စက်ပျက်သွားတယ်။)
The .............................. s were all luxury models. (အားလုံး ဇိမ်ခံအကောင်းစား မော်ဒယ် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
.............................. is not allowed in the bus lane. (ဘတ်(စ်)ကားယာဉ်ကြောမှာ ခွင့်မပြုပါ။)
The .............................. was moving very fast. (အလွန်လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေခဲ့တယ်။)
The weight capacity of this bridge is ten ............................. s. (ဒီတံတားရဲ့ အလေးချိန် ခံနိုင်ဝန်ကတော့ ဆယ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။)
(1-car တစ်မျိုးသာ၊ 2-cars တစ်မျိုးသာ၊ 3-traffic တစ်မျိုးသာ၊ 4-traffic နှင့် car ၊ 5-cars တစ်မျိုးသာ)
အထက်ဖော်ပြပါ ၀ါကျတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရေတွက်ရ Countable လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ cars နဲ့ ရေတွက်မရ Uncountable လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ traffic အတွက် အခုလိုမျိုး စည်းမျဉ်းတွေ ရှိတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရေတွက်မရ နာမ် Uncountable noun တွေမှာ ဗဟုဝုစ်ပုံစံ (အများကိန်း) plural form မရှိဘူး။
ရေတွက်မရ နာမ် Uncountable noun တွေကို ဧက၀ုစ် singular (အနည်းကိန်း) အဖြစ် သုံးမယ်ဆိုရင် article လို့ခေါ်တဲ့ a/and/the ထည့်စရာ မလိုပါ။
ရေတွက်ရ/မရ နာမ် Countable/Uncountable တွေရဲ့ ရှေ့မှာ the ဆိုတဲ့ article ထည့်နိုင်တယ်။
ရေတွက်မရ နာမ် Uncountable noun တွေရဲ့ ရှေ့မှာ a/an ဆိုတဲ့ indefinite article ထည့်နိုင်တယ်။
ရေတွက်ရ နာမ် Countable noun တွေကို one/two/...ten ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ တွဲသုံးနိုင်တယ်။
ရေတွက်မရ နာမ် Uncountable noun တွေဟာ အဓိပ္ပါယ်တိကျမှု လျော့နည်းတယ်။
ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အောက်ပါဝါကျတွေကို ကွက်လပ်ဖြည့်ကြည့်ပါ။ ကွင်းထဲမှာ ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို အနည်းကိန်းအတိုင်း ဒါမှမဟုတ် အများကိန်း ပြောင်းပြီး ကွက်လပ်ဖြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွက်လပ်တစ်ခုမှာ ထည့်လို့ ရနိုင်သမျှ ပုံစံတွေကို ဖော်ပြပေးပါ။
In an emergency, fire-fighting .................... can be reached by smashing the glass cover. (equipment, tool)
အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ မှန်ကိုခွဲပြီး မီးသတ်ကိရိယာတွေကို ယူနိုင်တယ်။
The company has not replaced the .................... in the boiler room since the factory was opened in 1953. (machine, machinery)
၁၉၅၃ခုနှစ် စက်ရုံစဖွင့်ကတည်းက ဘွိုင်လာခန်းထဲက စက်တွေကို ကုမ္ပဏီက အစားထိုး လဲလှယ်တာ မရှိသေးဘူး။
This involvesa.................... to the site in order to assess the damage caused. (travel, journey)
အခုလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုအကဲဖြတ်ရပါမယ်။
Viruses were found on three .................... which staff had illegally copied onto the system. (program, software)
ကွန်ပျူတာစနစ်အထဲကို ၀န်ထမ်းများ တရားမ၀င် ကူးယူခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ၃ခုမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ တွေ့ရပါတယ်။
The Maintenance Department were called in to adjust the .................... in the car park. (light, lighting)
ကားရပ်နားတဲ့ နေရာမှာ ထွန်းထားတဲ့ မီး(တွေ)ကို အလင်းအမှောင်ညှို့ဖို့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Our clients needalot of .................... about the progress of the project. (information, fact)
စီမံချက် တိုးတက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုရယူသူများက အချက်အလက်အများကြီး တောင်းပါတယ်။
The smell of burning ....................led us to believe that the alignment was faulty, causing uneven wear. (tyre, rubber)
ညှော်နံ့ရတဲ့အတွက် ရှေ့ဘီးနောက်ဘီး တည့်မတ်မှု အလိုင်းမင့် မမှန်ဘူး၊ ညီညီမျှမျှမဟုတ်ဘဲ တစ်ဖက်စောင်းပြီး ပွန်းစားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
The pollution is the equivalent of smoking twenty ....................aday. (cigarette) လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် တစ်နေ့ စီးကရက် အလိပ် ၂၀ သောက်တာနဲ့ ညီမျှနေပါတယ်။
There are seven .................... which the operator needs to adjust constantly. (switch,instrumentation, control)
စက်ကိုင်ဝန်ထမ်း မပြတ်ချိန်ညှိ့ပေးရမှာ ၇ ခု ရှိပါတယ်။
(1-equipment သို့မဟုတ် tools, 2-machine သို့မဟုတ် machinery, 3-journey, 4-programs, 5-light သို့မဟုတ် lighting, 6-information သို့မဟုတ် facts, 7-tyres သို့မဟုတ် rubber, 8-cigarettes, 9-switches သို့မဟုတ် controls)
အစီရင်ခံစာရေးသားရာမှာ ရေတွက်မရနာမ် uncountable noun တွေကို ရေတွက်ရနာမ် countable noun အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့သုံးလေ့ရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ equiptment ပစ္စည်းကိရိယာ၊ news သတင်း၊ transport သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ gasoline ဓာတ်ဆီ ဆိုတဲ့ ရေတွက်မရ နာမ် uncountable noun တွေကိုapiece of equiptment ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခု၊ an item of news သတင်းတစ်ပုဒ်၊atype of transport သယ်ယူပို့ဆောင်မှုပုံစံတစ်မျိုး ၊alitre/gallon of gasoline ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ/တစ်ဂါလန် လို့ ရေးခြင်းဖြင့် ရေတွက်ရနာမ် ဖြစ်သွားပါတယ်။
ရေတွက်မရ နာမ် uncountable noun တွေကို အလွယ်တကူ အုပ်စုခွဲလို့ ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ advice အကြံ ဥာဏ်၊ honesty ရိုးသားမှု၊ responsibility တာဝန် ဆိုတဲ့ နာမ်တွေဟာ အရည်အသွေးတစ်ခုကို ထုတ်ယူပြသတဲ့ abstractions ထုတ်ယူနာမ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ accounting စာရင်းကိုင်၊ economics စီးပွားရေး၊ sociology လူမှုဗေဒ ဆိုတဲ့နာမ်တွေကတော့ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ oxygen အောက်ဆီဂျင်၊ air လေ နဲ့ helium ဟီလီယမ် တို့ကတော့ ဓာတ်ငွေ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ Gas ဓာတ်ငွေ့၊ soda ဆိုဒါ နဲ့ water ရေ ဆိုတဲ့နာမ်တွေကတော့ စီးဆင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများ fluid တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ပညာရပ်ပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက ပစ္စည်းတွေ၊ စက်တွေ၊ နည်းပညာတွေကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေတွက်ရနာမ် countable noun တွေနဲ့ ရေတွက်မရနာမ် uncountable noun တွေ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ သတိပြုပြီး ရေတွက်ရ မရ အဘိဓာန်နဲ့ စစ်ကြည့်ပါ။
(Guy Perring ၏ Grammar in Technical Reports အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/grammar-in-technical မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by 0jhlgxon1ll23 on April 28, 2011 at 11:54
It is really good to improve English Language. I want to answer as below; 1 ) car2) car3) traffic4) car5) traffic like that. Pls check out me and reply.
Permalink Reply by မေကဗျာ on April 29, 2011 at 8:46
Hay that song grade. I like that words!
It is really good to improve English Language.
Permalink Reply by minlatt on May 4, 2011 at 21:53
Permalink Reply by laeyinmon on May 5, 2011 at 10:43
Permalink Reply by Kyaw Oo on May 12, 2011 at 13:27
Permalink Reply byွှTartoolay on May 23, 2011 at 10:32
Permalink Reply by thu ra soe on May 26, 2011 at 17:05
Permalink Reply by 1z32bac4b8r2j on May 27, 2011 at 11:02
Permalink Reply by 3fso63n0jz6d9 on June 4, 2011 at 17:30
Thanks for the grammar sharing and it's assist to improve of the writhing skill.
Permalink Reply by Ye Htut on June 18, 2011 at 11:26
Please sent me like this mail future.
Permalink Reply by aungnaingthu on October 23, 2014 at 10:39